အေးငြိမ်း – ကျွန်တော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေ | MoeMaKa Burmese News & Media
၎င်းတို့လုပ်နေသည်မှာ ခါးတောင်းကျိုက်တလွဲ၊ – င်တလွဲ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်စံကိုအခြေခံသလဲကွဲ့ ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် မေးလာသည်ဖြစ်အံ့။ ဖြေဘို့ရာ အလွန် ခက်ခဲပါသည်။ ရန်ကုန် – နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမှာတောင်မှ တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ ထက် မပိုရ ဟု ရေးလိုရေး။ တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ထက် မကျော်ရဟု တပ်လိုတပ်။
(အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်တဲ့သူတွေက ဦးစီးလို့ စားသောက်တဲ့သူတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ သုံးစွဲတဲ့သူတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိတယ်) – ဆိုပါလား။ လွဲလိုက်လေခြင်းခင်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဖွဲ့စည်း တည်ရှိနေတာကို ထောက်ခံပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရသည့် ရှေ့နေဦးရေးလိုတော့ (ဟဲ့၊ သမီးရွှေစင် တယ်နာသလား။) (နာတယ်အဘေရဲ့) (ဟဲ့ သက်ရှည်၊ တောင်ပိုင်းကလက်သည် သွားခေါ်ချေ) – ဟု အမြင်မတော် ဆင်တော်နှင့်ခလောက် အလုပ်များ မလုပ်စေချင်ပါ။ လူကြီးဆိုတာ လူကြီးအလုပ် လုပ်ရသည်။
နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ရူရန် – ဧရာဝတီ အင်တာဗျူး
One Response to အေးငြိမ်း – ကျွန်တော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေ
Tint Htun on February 15, 2016 at 6:52 am
MEC Arrow signboard, is the best. who allowed this smartest design and which P.E approved.
Nyan Htoon Oo is Metallurgy Engineer, he knows nothing but makan money
and Ex-P.M from Kyant Phinn Party. Better take care of your granchildren.